Email Suuq Istiraatiijiyadeed Waxaad U Baahan Tahay Inaad Ogaato | Martech Zone
Ii-mayl Xogta Suuqgeynta Waxaad U Baahan Tahay Inaad Ogaato
Khamiis, May 22, 2014 Douglas Karr
Si aad ah uma hubo in tirakoob kasta oo suuq-geyn email ah halkan uu muhiim u yahay suuq-geynta emaylkaaga, laakiin in yar oo ka mid ah ayaa runtii ii muuqda:
Dakhliga Xayeysiinta ee Emailka waa wax layaableh oo hooseeya oo aan aad looga faaiidaysan. Waxaan marwalba layaabaa boggeena gaarka ah in xayeysiiska cinwaanku si isdaba joog ah u iibiyo… laakiin cidna ma iibsan ku xayaysiinta wargeyskeena maalinlaha ah iyo toddobaadlaha taasi waxay gaaraysaa in ka badan 75,000 oo macmiil toddobaad kasta.
Korsashada emaylka ayaa maraya meeshii ugu sarreysay, iyadoo macaamiisha 95% ay hubinayaan emaylkooda ugu yaraan hal mar maalintii! Haddii aadan u dirin farriin waqtigeeda ku saabsan helitaan, haynta iyo istiraatiijiyado kor u qaada rajadaada iyo macaamiishaada ... waad iska maqantahay!
Isticmaalka Emailka Moobaylka sidoo kale heer sare ayuu marayaa! 64% dadka go’aanka gaara waxay ku aqriyaan emayllada aaladaha mobilada. Emailadaadu ma yihiin kuwo ka jawaaba aaladaha mobilada oo si fudud loo akhriyi karo? Weli waan ka naxay inta magac ee muhiimka ah ay ii soo diraan emayllada aan ka akhriyi karo taleefankayga gacanta. Marar badan ayaan mashquul ahay oo si fudud ayaan u tirtiraa intii aan sugi lahaa illaa aan ka soo laabto desktop-ka si aan u akhriyo.
Waxaa laga yaabaa in qiyaasta ugu muhiimsan ee dhammaan ay tahay in $ 1 kasta oo lagu kharash gareeyo istaraatiijiyadaha suuq geynta emailka, $ 44.25 waa celceliska celceliska maalgashiga suuq geynta. Taasi waa soo noqoshada maalgashiga ee aan si weyn looga adkaan karin iyada oo loo marayo wadiiqooyinka kale ee suuq geynta iyo istaraatiijiyado.
Macluumaad ku saabsan Muuqaal-yaqaan.
Tags: naqshadeynta emaylkaEmail Marketingiimaylka tirakoobka suuqgeyntaakhriska emailkaemaylka tirakoobkaemaylka gacantaemaylka jawaabta lehemaylka jawaabta leh